Sidee loo Xidhaa Koontada Instagram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo xiro koontada instagram?
Markuu tixgeliyey xaqiiqda ah Instagram waa mid ka mid ah shabakadaha bulshada ugu muhiimsan adduunka tikniyoolajiyadda, taas oo qayb ka noqotay nolol maalmeedka dad badan iyo qayb aasaasi ah oo noloshooda ka mid ah, illaa heer ay saameyn ku yeelato siyaabaha fekerka iyo ku dhaqanka macaamiisha. In badan ayaa saameyntiisa ah oo waxay heli kartaa macluumaad saameyn ku yeelan kara nolosha dadka isticmaala si wanaagsan iyo si tabanba.
Tirada dadka ee ay Instagram marin u hesho darteed, oo ay ku jiraan fikirradooda, cilaaqaadkooda iyo dareenkooda, waa sax in la yiraahdo taas barxadani waxay noqotay weji kale oo nolosha ah, oo qof walba isku dayo inuu la qabsado kana mid noqdo. Si kastaba ha noqotee, munaasabado badan tani waxay u noqon kartaa mid culus, caajis iyo niyad jab dad badan, sidaa darteed ikhtiyaarka wanaagsan ee looga fogaado waa in la tirtiro koontada.
Arrintu markay sidaa tahay, haddii go'aanka ku xiro koontadaada instagram in mudo ah Waxaa loo samayn karaa habka soo socda, adoo ka galaya webka:
Marka hore waa inay bilaw qaybta sidii caadiga ahayd madal.
Markaad halkaa gaarto, waa inaad gujisaa sawir muuqaal ah oo ku yaal xagga sare ee barxadda.
Iyada oo tan la adeegsanayo, ayaa astaanta fureysaa meesha aad ku riixeyso "Wax ka beddel ", tan waxaa laga helaa, oo ku xigta magaca qofka.
Marka aad diyaar garowdo, waa inaad raadisaa oo aad doorataa "hawl gab".
Isla mar ahaantaana, guji Jooji akoonkeyga si kumeelgaar ah.
Iyadoo taas, ikhtiyaarka koontada loo xirayo waa in la cayimo.
Marka tan la sameeyo, waa inaad dhiib lambarka sirta ah.
Tan, koontada ayaa lagu naafoobi doonaa sidaas darteedna astaanta, sawirrada, waxyaabaha la jecel yahay iyo faallooyinka qarsoonaan doonaa, ilaa ay dib-u-awood.
Talaabo talaabo talaabo uga qaad taleefanka gacanta
Haddii go'aanka ugu dambeeyo yahay, maxaa la sameeyaa si joogto ah looga tirtiraa koontada Instagram taleefanka gacanta, hawshu waa isku mid, si loo joojiyo kaliya dhowr tallaabo oo ku kala duwan. Si kastaba xaalku ha ahaadee, tilmaamaha la raacayo waa kuwan soo socda:
Nidaamka saxda ah
Codsiga instagram waa in lagu rakibaa taleefanka gacanta, haddii ay dhacdo in aan laga soo dejisan taleefanka, waa inuu instalar ka socota dukaanka barnaamijka.
Iyadoo taas, waa inay gali barnaamijka taleefanka gacanta.
Isla mar ahaantaana waa inaad riixdo Guji sawirka astaanta.
Markaa waa inaad ka dhex raadisaa xulashooyinka loogu talagalay "Dejinta"
Ka dib waa inaad doorataa "Si joogto ah u tirtir akoonkeyga."
Marka xigta, waa inaad ku sifeeysaa shaashadda dooro ikhtiyaarka inaad tirtirto koontada Joogto ah.
Kadib, waa inaad kala doorataa xulashooyinka ka muuqda shaashadda, si aad hadhow u cadaadiso "tirtirto xisaabta iyo macluumaadka." Kadib guji "sii wad".
Si aad u dhammaystirto, waa inaad gashaa lambarka sirta ah oo aad mar labaad riixdo badhanka "sii wad".
La dhammeeyay, iyada oo leh macluumaadka si joogto ah ayaa loo tirtiray.
1 Dami instagram
1.1 Talaabo talaabo talaabo uga qaad taleefanka gacanta
2 Nidaamka saxda ah
Sidee loo beddelaa magaca isticmaalaha TikTok?
Sidee loo xiraa Facebook si ku meel gaar ah?